Knowledge - All Things Myanmar Burmese
Knowledge - shweDarling.com Blog
ကဲ ပြောပြမယ် ကျမရဲ့ Sony TV ၄၆ လက်မ ပါဝါမလာတော့လို့ Sony service center မှာသွားပြင်ပါတယ် သူတို့ပြောတာ က အစ်မရဲ့ TV ဟာ ဘာပျက်တာလဲဆိုတာ သိရဖို့ (၇ ရက်)စောင့်ရပါမယ် စစ်ဆေးပေးပါမယ် နောက်ပြီးရင် ကျသင့်ငွေကို ပြောပါမယ် ( မပြင်ချင်ရင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခ ၅၂၅၀ သွင်းပြီးပြန်ထုတ် နိုင်ပါတယ်)တဲ့ ။ Ok ကောင်းပြီလေ သဘောတူလို့ ကျမ (၇ ရက်)သူတို့ဆီ ထားပေးပါတယ် ။ စမ်းသပ်ပြီးတော့ ဖုန်းဆက်လာတယ် အစ်မTV ကရှေ့က မှန်ပြား ကြီး ပျက်တာတဲ့ ပြင်မယ်ဆိုရင် TV တန်ဖိုးရဲ့ 80% ကုန်ကျမှာ မို့ မပြင်နဲ့တော့တဲ့ ။ […]
“ထမင်းဝအောင်စားထား” ဟုဆိုသူများကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီ =============================== ရန်ကုန် (Myanmar Now) — လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က အင်းစိန်မြို.နယ် မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံးတွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ.နေ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုကြားနာစဉ် “မင်းတို့ထမင်းဝအောင်စားထား” ဟူသောစာသားများပါသည့် တီရှပ်များဝတ်ဆင်လာပြီး လူသတ်တရားခံကြည်လင်းကို လာရောက်အားပေးခဲ့သူများကို ယမန်နေ့က အမှုဖွင့်၍ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ တရားခွင်အား လာရောက်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူများအား အရေးယူပေးရန် အင်းစိန်မြို.နယ် အထွေအထွအုပ်ချုပ်ရေးမှုးက တရားလိုလုပ်၍ အင်းစိန်မြို.နယ် တရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ရာ တရားသူကြီးက အများပြည်သူကိုထိတ်လန့်စေမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို နစ်နာစေရန်ခြိမ်းခြောက်မှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၈၉ တို့ဖြင့် ပုဒ်မတပ်ပြီး လူ ၄ ဦးအားဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း တရားရုံးသတင်းရပ်ကွက်မှ သိရှိရသည်။ မင်းတို့ထမင်းဝအောင်စားထားဟူသော စကားရပ်မှာ လူသတ်ရန်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့တရားရုံးတွင်ပြောင်ပြောင်တင်းလာရောက်ခြိမ်းခြောက်မှုသည် တရားရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ခုလုံးကို စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သောကြောင့် […]
Posted in Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Photography, shweDarling | No Comments »
❗️Jude Jude ( ခေါ် ) ဒေါ် သက်သက်မြိုင်ကြောင့် နစ်နာသူ ရှယ်ယာရှင်များ မှ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ရှင်းလင်းမည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ❗️ 👉 တစ်လ ၂၀-၃၀% အမြတ်ငွေပေးတယ်ဆိုပြီး လူတွေကို ငွေရင်းခိုင်းပြီး သိန်းပေါင်း သောင်းချီထိ ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ငွေရှင်တွေကို အတိုးလည်း မှန်အောင်မပေး / အရင်းကိုလည်း သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း ပြန်မထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ Jude Jude ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က ဘယ် ငွေရှင်ကိုမှ မဖိတ်ပဲ သူ့ဘာသူ တစ်ဖက်သတ်ပြောချင်ရာ ပြောလို့ရတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု လုပ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ 👉 ဒီလို တစ်ဖက်သတ် ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာဟာ မတရားဘူးလို့ ယူဆ […]
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁) ရပ်ကွက်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ၊ ခြံအမှတ် ၅၄ / ၅၆ ခြံဝန်းအတွင်းသို့ မီးလောင်စေသည့် ပုလင်းပစ်ပေါက်ခဲ့ သည့် တရားခံအား အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပြည်သူများမှ သတင်းရရှိပါက သတင်းပေးနိုင်ပါရန် အသိပေးဖော်ပြခြင်း ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲအချိန်ခန့်က ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁) ရပ်ကွက်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ၊ ခြံအမှတ် ၅၄ / ၅၆ ရှိ ခြံဝန်းအတွင်းသို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှ မီးလောင်စေသည့် ဖန်ပုလင်း ၁ လုံးအား ပစ်သွင်းခဲ့သဖြင့် ခြံဝန်းအတွင်း ခြံစောင့်တဲအနီးရှိ ရေပိုက်တစ်ချောင်းမှာ မီးစွဲလောင်ကျွမ်းသဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အရေးယူရန် ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်း (ပ) […]
Posted in Articles, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, shweDarling | No Comments »
အဓိကတရားခံဟာသူပါပဲ။ ။ ( by – မင်း ဒင်) ************************* “ကျူးလွန်သူတွေဟာ၊အမိန့်ပေးသူရဲ့အစွမ်းအစကိုလုံးဝယုံကြည်ထားတာပေါ်လွင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမိန့်ပေးသူဟာ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီပဲယင်းမှာလုပ်ကြံဖူးတဲ့လက်စလက်နရှိတယ်။ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကို၊အမှုမှန်မပေါ်နိုင်အောင်၊ဖုံးဖိတားဆီးနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။တတိုင်းပြည်လုံးကို -ီးထင်တယ်ဆိုတဲ့အချိုးနဲ့၊ ဒီနေ့အထိလူဝါးဝနေနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုလုပ်ကြံမှုမျိုးကိုလူပုံအလယ်မှာ၊လက်ရဲဇက်ရဲကျူးလွန်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဆင်တစ်ကောင်လုံးတွေ့နေတဲ့ကိစ္စဗျာ။ဆင်ခြေရာကိုပြန်ရှာစရာမလိုပါဘူး။မြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်တာကမှလွဲချင်လွဲဦးမယ်။တကယ်တော့ အဓိကတရားခံဟာ သူမှသူပါပဲ။ ။” လောကကြီးမှာ၊ဆင်တစ်ကောင်လုံးမျက်စိနဲ့တပ်အပ်တွေ့မြင်နေပါလျက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်း၊ဆင်ခြေရာကိုကြည့်ပြီး၊ဆင်ဘယ်မှာလဲဆိုတာ၊ အချိန်ကုန်ခံပြန်ရှာနေရတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်။အထင်ရှားဆုံးဥပမာပြရရင်၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့၊ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုပါပဲ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ၊အမှုဖွင့်၊တရားရုံးတင်၊နှစ်ဖက်သက်သေတွေ ထွက်ဆို၊နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေလျှောက်လဲနဲ့၊တိုင်ပတ်နေတာတစ်နှစ်သာ ကြာတယ်။အခုထက်ထိသေချာရေရာတဲ့အဖြေထွက်မလာသေးတဲ့အပြင် တရားခံတွေဘက်ကတောင်၊အာခံကြုံးဝါးသံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ အမှုအခင်းထုံးစံအတိုင်းအချိန်တွေကြာလာတော့၊အများစိတ်ဝင်စားမှု အာရုံစိုက်မှုလျော့နည်းလာတယ်။အမှန်ကလည်း အဲသလိုဖြစ်လာအောင် ကို၊တမင်အချိန်ဆွဲနေကြတာပဲ။လူမသမာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင် တယ်ဆိုရမယ်။ တကယ်တော့ဒီအမှုဟာမေ့ထိုက်တဲ့အမှုမဟုတ်ဘူး။သာမန်လူသတ်မှု မဟုတ်ဘူး။ဦးကိုနီကိုလုပ်ကြံရုံသာမက၊နိုင်ငံတော်ကိုပါလုပ်ကြံလိုက်တဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။ ဦးကိုနီဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုစိုက်လိုက်မတ်တတ် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးကို အရည်ကျိုသောက်ထားသူ၊အားနည်းချို့ယွင်းချက်တွေကိုမြင်နိုင်သူ၊ ယိုပေါက်ကိုရှာဖွေထောက်ပြနိုင်သူ၊ပါရမီရှင်ဖြစ်ကြောင်း၊သူ့ဟောပြော ရေးသားချက်တွေကသက်သေခံနေတယ်။ အဲဒီလိုထိရောက်ပြောင်မြောက်တဲ့ထောက်ပြချက်တွေကြောင့်၊ဖွဲ့စည်း ပုံကိုအကာအကွယ်ယူပြီး၊လူဝါးဝမြဲဆက်ဝနေတဲ့လူယုတ်မာတွေဟာ တစိမ့်စိမ့်တွေးရင်းကျောချမ်းလာပုံရတယ်။နောက်ကျောမလုံတော့ပဲ၊ တုန်လှုပ်လာပုံရတယ်။ဒီမှာတင် ဦးကိုနီကိုအပြတ်ရှင်းမှဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်လာတာပါပဲ။ဒီလိုလုပ်ကြံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့၊နောင်ကြိုးပမ်းလာမဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရိုက်ချိုးပြီး နိုင်ငံတော်ကိုလုပ်ကြံလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့၊ဘယ်သူကအမိန့်ပေးလမ်းညွန်ခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြရင်သိပ်မခက်ခဲလှပါဘူး။ အဓိကကြိုးကိုင်သူဟာ ငွေကြေး၊လက်နက်၊အာဏာ၊သူ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိအောင်ပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အပါအဝင်၊စစ်တပ်အရာရှိတွေကို၊ဒီလုပ်ကြံ မှုမျိုးစေခိုင်းဖို့ဆိုတာ၊အထက်ပါအချက်သုံးချက်စလုံးပြည့်စုံမှဖြစ်မယ်။ လုပ်ကြံမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေဟာ၊သူငယ်နှပ်စားအရွယ် တွေမဟုတ်ဘူး။သံအရာရှိ၊ပြည်နယ်အမတ်အဆင့်တွေပါပါတယ်။ မြင်သာတဲ့သက်သေကတော့ […]
Posted in Articles, Myanmar/Burmese, Notes, shweDarling | No Comments »
၁၁၅ ကျွန်းသို့ ရောက်သောအခါ ရင်မောစရာပင် ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကဆီးကြိုနေသည် Aureum 115 တဲ့ ။ ဘာလဲဟုမေးကြည့်ရာ ကျွန်းကိုဦးတေဇပိုင်သွားပြီတဲ့ ။ Aureum 115 အမည်ဖြင့်ဟိုတယ်ဖွင့်တော့မည်တဲ့။ ကျွန်းပေါ်သို့ ပင် တက်ကြည့်ခွင့်မရှိတာ့ပါတဲ့ ။ဟိုတယ်ဆောက်နေပါသည်တဲ့ ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လဲ စက်လှေကပ်မိသည်မှတစ်ပါး ကျွန်းပေါ်သို့ မယ်မယ်ရရ၀င်မကြည့်ခဲ့ရပါ ။ လွန်ခဲ့သော ခြောက်လခန့်ကလည်း မြိတ်မြို့သို့ စာပေဟောပြောရင်း ပင်လယ်ထဲသို့ အလည်လိုက်ပို့ ရာ အလွန်လှသောနတ်သမီးရေတွင်းကျွန်းသို့ ရောက်ခဲ့ပေ၏ ။ ထိုကျွန်း၏ ကမ်းခြေအလျားပေ ၃၀၀ ခန့်တ၀ိုက်သာ ဧည့်သည်တွေသွားလာခွင့်ရှိသည် ။ စက်လှေတွေဆိက်ကပ်ခွင့်ရှိသည် ။ မိုင်နှင့်ချီ၍ရှည်သော ကျွန်းကြီးတစ်ခုလုံးက ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၏သမီးအစုရှယ်ယာပါသောအဖွဲ့ ကို ပုလဲမွေးမြူရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချပေးလိုက်ပါပြီဟုဆို၏ ။ ဘယ်တုန်းကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရသလဲဟူမူ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမဆင်းခင် လပိုင်းကမှ […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Myanmar/Burmese, Notes, shweDarling | No Comments »
Beware about Pollen!
Posted in Articles, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Interviwed with Dr.Zin Min Ko (MaHlaing Private High School)
၁၀ တန်း မအောင်နိုင်ရင် မလှိုင်ပို့လို့ ပြောစမှတ်ပြုရတဲ့၊ ၇၉၉ ဦးမှာ ၇၉၈ ဦးအောင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တခုတည်းသော မလှိုင်မိသားစု ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေးတာဝန်ခံ ဒေါက်တာဇင်မင်းကိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း =========================== မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (၁၀ တန်း) အောင်စာရင်းထွက်ပြီဆိုလျှင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မလှိုင်မြို့ရှိ မိသားစုကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း(မလှိုင်မြို့)၏ အောင်စာရင်းရလဒ် မည်ကဲ့သို့ရှိမည်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်လေ့ရှိကြသည်။ မလှိုင်မိသားစု ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ အစဉ်အလာအောင်ချက်ကောင်းမှု ထူးချွန်ကျောင်းသားများစွာ မွေးထုတ်နိုင်မှုကြောင့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ် ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်း ကျောင်းသားမိဘများ၏ အားထားရာတခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်းထွက်အပြီး တပတ်အကြာ ၂၅-၆-၂၀၁၇ နေ့တွင်ပင် ယခုနှစ် ၉ တန်းကျောင်း တက်နေသည့် […]
Posted in Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
အပျင်းပြေ ဖတ်ကြည့်ပေါ့… သေသေချာချာ သိသူများ ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါ… အမှားရှိရင် ပြင်ပေးကြပါ။ ကို Naung Kyaw ဆီက ယူလာတာပါ။ …………………………….. . ^^ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ပါတီပိုင်လုပ်နည်း နိဿရည်းများ^^ ငိငိ #ကြံ့ဖွတ်ပါတီရုံးသမိုင်းပေါင်းချုပ် (လက်ရှိစုစည်းမိသမျှဖြစ်သည်) သူတို့ကပြောင်လိမ်နေတောလည်း ပြည်သူက ဝိုင်းဖော်ကြတာပေါ့ဗျာ စာရင်းပြုစုလိုက်တော့ ကြံ့ဖွတ်ရုံးတွေ ဒီလိုဖြစ်တည်လာတာဗျ အင်းစိန်​ကလူမှုဖူလုံ​ရေး​ဆေးခန်း ဘာအ​ကြောင်းပြချက်​မှမပါဘဲ ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးရုံးခန်းဖြစ်​ပီးသကာလ GTI ဝင်းထဲကအုတ်​တရ ​ကျောင်းသား​ဆောင်​ကို ဒင်းတို့ဆေးခန်းဆိုင်းဘုတ်​ထူကြတယ်​ ( Credit – Maung Myint ) – အင်းစိန်​ Bocမှတ်​တိုင်​အနီး ​မြောက်​ပိုင်းခရိုင်​ရုံး မီးရထားပိုင်​​မြေ ( Credit – Hein Htet ) – စစ်ကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့ ကျမတို့အထက်တန်းတက်နေတော့ပန်းခြံဘေးကဖြတ်သွားရတယ်ကျောင်းလစ်ပြိးတော့လဲပန်းခြံမှာပုံးဘူးတယ်ပန်းခြံထဲမှာလဲသူငယ်ချင်းတွေစုပြိးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖူးတယ်ကြံ့ဖွံ့ပေါ်လာတော့အသင်းအခုပါတီဖြစ်သွားပြီပေါ့ ( Credit […]
Posted in Asia Entertainment, Humor, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Beware of Play machine from Pyithu Oo Yin!
ပြည်သူ့ဥယျာဉ် စကောကြီးထဲဝင်ပြီးအဆော့ကောင်းလို့ ခါးရိုးကျိုးသွာပါတယ် ဆေးရုံနှစ်ခါပြောင်းပြီး ဆေးရုကြီး ရောက်မှ စတီး ၆ သိန်းတန်ထည့်မှကောင်းမယ်ဆိုလို့ ထည့်လိုက်ရပြီနော် သားသမီးတွေသွားရင်တားရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါ တယ် သမီးသဲသဲအေးကို ပါ မိဘတွေမနားရပါဘူး အလုပ်ပျက်ရပါတယ် တဆင့် ရှဲပေးပါနော်
True reasons behind last night riot
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၀င်စီး ရိုက်နှက် အကြောင်းပြချက် မပါရှိ ယခု ညဘက် (၁၀ နာရီခွဲ) ၀န်းကျင်ခန့်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် မြယာကုန်းလမ်း ၁၂ ၂ နှင့် ၁၂၃ လမ်းကြား အိမ်အမှတ် (၁၀၅) ( ၁၀၇) အထပ် (၈) လွာထပ်သို့ စခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် စခန်းမှူးနှင့် မဘသ အဖွဲ့ဝင်များအပါဝင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ပါ လိုက်ပါလျက် လူဦးရေ အယောက် ၂၀ ခန့်နှင့် ရဲကား (၆) စီး ခန့် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ တိုက်ခန်းအား အားလုံး လေးဘက်လေးတန် ၀ိုင်းလား၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းတွင်းအိပ်ခန်းတွင်းမှ ဒေါ်ဝင်း ၏သမီးအား မခင်မာဝင်း ( အသက် ၃၁) နှစ်အား […]
Photo credit Phoe Tu
ဆရာမ စာလဲဆုံးသွားရော ကိုယ်ကိုယ်ကိုရှက်လိုက်တာ။ ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းရဲ့ သမီး အန်တီ မော်မော်သင်းရေးထားတာပါ။ ဆရာကြီး သမီးပီသလှပါတယ်အန်တီ။ တကယ် မှတ်သားရပါတယ်။ စာရှည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ရတာနဲ့တန်စေရပါမယ်။ ဘူဖေး ==== ဘူဖေး ဟူသောစကားလုံးမှာ အခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဟော်တယ်တွေမှာ ခေတ်စားသောစကားလုံးဖြစ်နေသည်။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်လျင်သူ့စာလုံးပေါင်းအသံ ထွက်မှာ ဘူဖက် ဟု ထွက်မလိုလိုနှင် တကယ့်အမှန်မှာ ဘူဖေးဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်သူမူရင်းအစမှာ ပြင်သစ်လား အီတလီလားမဆိုနိုင်။ ဝေါဟာရ အဘိဓာန်ကျမ်းမှာတော့ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက်ယူငင်စားသုံးနိုင်ရန် ခုံတန်းရှည်ပေါ်၌တန်းစီခင်းကျင်းထားသော စားသောက်ဖွယ်ရာများ ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ကျမသည် ထိုစကားလုံးကို အသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှ စတင်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ကျမ အဖေသည် ၁၉၈၄ – ၈၅ လောက်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်လာသမျှ ဗြိတိသျှ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး နှစ်ယောက်သုံးယောက်အပါအဝင် သံအရာရှိများကို […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes | No Comments »
If you need study Guide..
# Yangon-splash- walk 2017
# Yangon-splash- walk # 2017 ဝိုင်းကြ ။ ဝန်းကြ ။ ရန်ကုန် သား ဘဝ ။ Yangon- splash – walk page ကို like လုပ်ထားရင်း ဆုံရမယ့် စုရပ် ။ နေ့ရက် ။ လိုအပ် တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် တွေ ကို information ရ ယူ ကြပါ ။ ကလေး လူကြီး အရွယ် မရွေး ပါဝင် ဆင်နွဲ ကြပါစို့ ။ ရန်ကုန် သင်္ကန် စိုပြေရေး အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ပေး။ သင်္ကြန် ရိုးရာ ထိန်းသိမ်းပေး ရန်ကုန် […]
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, shweDarling | No Comments »
Congratulations to Champion Win Tun!
Welcomed home World Amateur Chess Champion Win Tun!
Heroism နဲ့ မြန်​မာပြည်​
အမေရိကန်မှာဘာဖြစ်လို့အာဇာနည်တွေမရှိသလည်းလို့ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်၊ လူဦးရေကသန်း(၃၀၀)ကျော် သမိုင်းကြောင်းပလည်းအရှည်ကြီးပဲ၊ သမတလင်ကွန်းလည်းလုပ်ကြံခံရတာပဲ၊ သူလည်းအာဇာနည်မဖြစ်ဘူး၊ သမတကနေဒီလည်းလုပ်ကြံခံ၇တာပဲ၊ သူလည်းပဲအာဇာနည်မဖြစ်ဘူး၊ သေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်း၊ အမေရိကန်တွေကတိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ဆောင်ရင်းအသက်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုဂုဏ်ပြုကြ သလည်းပေါ့၊ ရှိတာပေါ့။ Memorial day အောက်မေ့ဘွယ်နေ့လေးမှာ ကျန်ရစ်သူတွေကစွန့်လွတ်ခဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် ရည်စူးပြီးဂုဏ်ပြုတာလေးက တစ်မျိုးချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ဘယ်သူနာမယ်မှလည်းမတပ်ဘူး၊ ရာထူးအကြီးအငယ်လည်း တန်းမစီထားဘူး၊ အားလုံးအသက်စွန့်တာခြင်းအတူတူ တန်းတူဂုဏ်ပြုပေးကြတယ်၊ လူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပြတယ်၊ လက်စသတ်တော့အမေရိကန်တွေဟာ သူတို့နောင်လာနောက်သားတွေကိုသူရဲကောင်း ကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒ(Heroism)ကိုအမွေမပေးခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ၊ တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲ၊ သူငယ်တန်းကစလို့တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိ သူရဲကောင်းဆိုတာကိုးကွယ်ရာသင်ခန်းစာကို အဆက်မပြတ်သင်ပေးခဲ့တယ်၊ အကျိုးဆက်ကတော့ နိုင်ငံရေးလောင်းရိပ်အောက်ကထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူး၊ ဆက်ပြီးကိုးကွယ်ကြ၊ နောင်အနှစ်တရာတစ်ထောင်။ တစ်သောင်း၊တစ်သိန်းထိလောင်းရိပ်ကတော့ထိုးနေဦးမှာပဲ၊ ဒါကြောင့် တို့မြန်မာပြည်မှာ ဟီးရိုးကိုးကွယ်သူတွေက လူတစ်ယောက်ကိုနှိမ့်ချပြောဆိုချင်ရင် “မင်းကဘာကောင်မို့လို့လည်း”ဆိုပြီး အဘိုးကိုလည်းလာပြီမယှဉ်လေနဲ့၊ အဖကိုလည်းလာပြီးမယှဉ်လေနဲ့ အမေ့ကိုလည်းလာပြီးမယဉ်လေနဲ့..ဆိုပြီး ပြောနေကြတာလူတိုင်းသိကြပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာက ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ၊ ဒီလိုပဲအမြဲတန်းအနင်းချေ ခံနေရမှာလား၊မေးစရာရှိလာပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျနော်က ဟီးရိုးကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒကို နားလည်မိလိုက်တာကတော့ မိမိကိုယ်ကို […]
Posted in Articles, Free Burma, Knowledge Base | No Comments »
တစ်ခါတရံ NLDအစိုးရကို အားမရဘူး။ အခုထက်ပို ပွင့်လင်းစေချင်တယ်။ အဲ့လိုပြောလို့ အစိုးရဘာတွေခိုးနေလဲလို့မထင်လိုက်နဲ့။ အခုက ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ရောက် သားသမီးကို အသိမပေးဘဲ ကြိတ်ဖြေရှင်းနေတဲ့ မိဘတွေလိုပဲ။ မိသားစု ဆင်းရဲနေလား ချမ်းသာနေလား ကြွေးတွေ ဘယ်လောက်ဝိုင်းနေလဲ သားသမီးကို အသိမပေးတော့ သားသမီးက လိုချင်တာမရတဲ့အခါ လိုချင်တာကို မပေးနိုင်တဲ့အခါ ငြိုငြင်လာရော။ ပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖဆိုပြီး ဖြစ်သမျှ အကုန်တင်ပြပြီး တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ဒုက္ခတွေကို နားလည်အောင် ဝိုင်းတွန်းလာအောင် လုပ်ရမယ့်အစား ပြည်သူကို သားသမီးလို သဘောထားပြီး ရှေ့ကရင်စီးခံ၊ ပြည်သူက ကလေးဆိုးတွေလို ငိုယိုတောင်း၊ မကျေမနပ်တွေဖြစ်လာ။ သိနေတော့လည်း တယ်စိတ်မသက်သာလှဘူး။ အစိုးရက လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲက ပြည်သူကို များများသိအောင် အသိပေးစည်းရုံးရမှာ မစည်းရုံးတော့ လှိမ့်ဆဲနေတာ မခံချင်တဲ့ ကိုယ်တွေက ဝင်ပြော […]
Posted in Articles, Knowledge Base | No Comments »
အချိန်ကာလအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကျော်ကွာခြားတဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထဲမှာ ကချင်တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးဟာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ထူးခြားစွာ ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ။ ။မူရင်းပိုင်ရှင်များ Credit to Saya Min Din
အိုင်ဒေါမတိုင်ခင်တစ်ရက်မှာ ရေးချင်လျက်နဲ့ “ငါ့ လူမုန်းများပါ့မယ်လေ။” ဆို တမင်မရေးပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့နဲ့ အိပ်လို့တောင် မပျော်နိုင်အောင် အဲသည်အကြောင်းကို စဉ်းစားမိတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ပြန်အဖြေထုတ်ရပါတယ်။ အဲသလောက် အပတ်တကုတ် စဉ်းစားအားထုတ်ပြီး ရေးလာခဲ့သမျှ စာတိုပေစတွေဟာ ပိုက်ဆံရဖို့ မဟုတ်မှန်းတော့ ကိုယ့်ဘာသာလည်းသိသလို တလောကလုံးလည်း သိမှာပါလေ။ နံမည်ကြီးချင်လို့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ မဟုတ်မှန်းတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားကို သိတာပါ။ ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးလည်းနေ။ ဘယ်သူကမှ အရေးတယူ လာမဖတ်လည်းနေ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရေးချင်လို့ကို ရေးနေတာ။ Like တွေ Share တွေ များချင်လို့ ရေးနေတယ် ထင်ရင်တော့ Ha Ha ပဲ ပေးပလိုက်မယ်။ “No. […]
“ဖီလင် ၂၉” သည်ကနေ့ဟာ ဖုန်းမော်သေတဲ့ ၂၉ နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။ RIT ကျောင်းဝင်းထဲကို စစ်သားတွေ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့လို့ ဖုန်းမော်၊ စိုးနိုင်၊ မြင့်ဦးနဲ့ ကျောင်းသားတချို့သေနတ်ဒဏ်ရာရပြီး နှစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေက မခံမရပ်နိုင်လို့ ဖုန်းမော်ကို အာဇာနည်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ ကိုယ်တို့အတန်းထဲက လူကြီးသားတစ်ယောက်က “သူ့ဘာသူ ဘုမသိဘမသိနဲ့ သေနတ်မှန်သေတဲ့သူကို အတင်းကြီး သူရဲကောင်းမြှောက်နေတယ်။” လို့ ပြောတော့ ကိုယ့်ဘက်က ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျည်းမိတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဖုန်းမော်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ ကောင်းရာကောင်းကြောင်း မလုပ်ပေးခဲ့ဘူးပဲ ထားပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘာသူ သူ့ကျောင်းဝင်းထဲ သူ့ကျောင်းသားအဆောင်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်နေတာ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ စစ်မြေပြင်လည်း မဟုတ်၊ စစ်ပွဲကာလလည်းမဟုတ်ပဲ၊ နေရင်းထိုင်ရင်း အသားလွတ်ကြီး […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes, shweDarling | No Comments »
ကျွန်မ နေရာကို ကျွန်မ မရှိရင် ဘယ်သူဝင်ယူမှာလဲလို့ မေးကြတယ် ….. ဒီကိစ္စကို ကျွန်မလုံးဝ မစဉ်းစားထားပါဘူး ….. ဒီမိုကရေစီမှာ နောက်တက်မယ့် ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကို ရွေးချယ်ထားစရာမလိုဘူး ….. ဒါဟာ အာဏာရှင်စနစ်မှာပဲ ရှိတာပါ ….. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Credit to ၇န်​နိုင်​​ဆွေ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်လောက်ကစပြီး ပျက်ဆီးယိုယွင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ ငွေဆောင်၊ ချောင်းသာ၊ ငပလီတို့ကို စွန့်ခွာပြီး အများစု (ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေရော၊ ငွေကြေး အနည်းငယ်သာသုံးစွဲနိုင်သူတွေရော) ဟာ မြိတ်ကျွန်းစုဘက်ကို ခရီးဆန့်လာခဲ့ကြတယ်… ဘယ်သူတွေကြောင့်၊ ဘာတွေကြောင့် မြိတ်ကျွန်းစုခရီးသွားလုပ်ငန်း တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ ပဏာယူပြီး မပြောလိုတော့… အခုပြောချင်တာက ဒီလိုမျိုး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ မြိတ်ကျွန်းစုရဲ့ ဘဘာဝအလှတွေဟာ စပြီး အထိအခိုက်တွေရှိလာခဲ့တယ်… ငွေဆောင်၊ ချောင်းသာက အကျင့်တွေ မြိတ်ကျွန်းစုကို ယူလာကြတယ်… Snorkeling တွေသွားတယ်… Snorkeling Guide တွေကို ရေအောက်ထဲဆင်းပြီး Hard Coral တွေ ချိုးခိုင်း၊ ယူခိုင်းတယ်… Guide တွေက Ethic ထားပြီး မယူပေးရင် အတိုင်ခံရတယ်… ဧည့်သည်နဲ့ ငွေမျက်နှာပဲ […]
Posted in Blogroll, Knowledge Base | No Comments »
အောင်ဝင်းခိုင်ကောင်ကလေး ….. မင်းကွာ DSA (၃၆)ဆင်း ကြည်း – ၂၆၀၃၄ ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်မှာ ဒုမှူးကြီး တာဝန်ဆိုတဲ့ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကြီးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်နော် ။ စစ်သက် (၁၉)နှစ်ခန့် ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပဲ ။ နှမြောစရာ ကောင်းတယ် ။ ထားပါ …. ထားပါ ။ ဒါတွေက ပြီးခဲ့ပါပြီ ။ ပြီးခဲ့ပါပြီ ။ အောင်ဝင်းခိုင်ကောင်ကလေး ….. မင်း ….. စစ်ဗိုလ်ကြီးလုံးလုံး ဗိုလ်မှူးကြီးရှုံးလောက်ပါဘိ ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ …. စစ်သားဆိုတာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ကာကွယ်ပေးသူ ဖြစ်ခဲ့လျက်သားနဲ့ … စစ်သားဆိုတာ နိုင်ငံတော်က ကျွေးတဲ့ ထမင်းနဲ့ ဟင်းတွေကို စားပြီး ….. နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူတို့က ထောက်ပံ့တဲ့ […]
Posted in Articles, Knowledge Base, Notes, shweDarling | No Comments »
အားလုံးကိုဖတ်​​စေချင်​လို့ပါ အကြော်သည် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ========================== ========================== အမရပူရမြို့ရှိ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ သွားရာလမ်းဘေးတစ်နေရာတွင် နာမည်ကြီးသည့် အကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသည်။ ထိုအကြော်ဆိုင်လေးသည် နံနက်လင်းပြီဆိုသည်နှင့် အကြော်ဝယ်လာသူအပေါင်းဖြင့် အုံခဲကာစည်ကားနေလေ့ရှိသည်။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းလောင်းရန်ဖြစ်စေ၊ နံနက်ခင်းအဆာပြေစားသုံးရန်ဖြစ်စေ လာဝယ်ကြသူများရှိသကဲ့သို့ အမရပူရမြို့လေးရှိ နံနက်ခင်းဖွင့် မုန့်တီ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်ဆိုင်လေးများကလည်း ထိုအကြော်ဆိုင်လေးမှတစ်ဆင့် ဖောက်သည်ယူကာ ပြန်လည်ရောင်းချကြသည်။ ထိုသို့ လက်လီလက်ကား ၀ယ်ယူသူများဖြင့် စည်ကားနေသည့် အကြော်ဆိုင်လေးကို ဆရာမအကြော်ဆိုင်ဟု လူသိများလေသည်။ ဆရာမအကြော်ဆိုင်ဟု လူသိများရခြင်းမှာ အကြောင်းရှိသည်။ အကြော်ကြော်ရောင်းနေသူ မျက်နှာပြုံးရွှင်ရွှင် အသားအရေ ခပ်ဝင်းဝင်းဖြင့် ရုပ်ရည်ရူပကာအဆင်းခံ့ညားလှသူ အသက် (၅၀)ခန့် အမျိုးသမီးကြီးမှာ အကြော်သည်အများစုလို အတန်းပညာ ကောင်းစွာမသင်ယူခဲ့ရသူ တစ်ယောက်မဟုတ်ပေ။ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ ဓာတုဗေဒအထူးပြု ဖြင့် B.Sc ဘွဲ့ရခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ပို၍ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောရမည်ဆိုလျှင် […]
​​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ ၁၃ ဟာ ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့ပါ
ပုခုံးချင်းယှဉ်ချင်ရင် သူ.လောက်တော့မြင့်ပါမှ (က) ဒေါ်ခင်ကြည်၏မှတ်ချက် ဗမာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ရိုးသားဖြူစင်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ခြင်း၊ အရည်အချင်းထက်မြက်ခြင်း၊ စိတ်နှလုံးပြည့်ဝခြင်း အစရှိတဲ့ဂုဏ်ဒြပ်အမြောက်အများရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေသူကိုပြပါဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ.ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အသက် ၂၀ ကျော်မှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ အသက် ၃၀ ကျော်မှာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် ထိုးဖောက်တက်လှမ်းနိုင်တာနဲ.ပါတ်သက်လို. သူ.ပါရမီဖြည့်ဖက်လည်းဖြစ်၊ သူ.ရဲဘော်လည်းဖြစ်တဲ့ ဇနီးကောင်းဒေါ်ခင်ကြည်ပြောခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုဟာ အင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဘာလဲဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်နားမှာဝန်းရံသူတွေဟာ အင်မတန်ထက်မြက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးထက်နိုင်ငံအကျိုးကိုသာကြည့်ကြသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့်ပါ တဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း သခင်အောင်ဆန်းဟေ့၊ ဗိုလ်တေဇဟေ့ ဆိုပြီး သမိုင်းမှာထွန်းပြောင်ခဲ့တာပါ တဲ့။ Hard Truth လို.တောင်ပြောလို.ရမယ့် နောက်မှတ်ချက်တစ်ခုကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာစောစောသေသွားလို.သာ နာမည်မပျက်တာ ဆိုတဲ့စကားပါ။ အတူတူအဆင်းရဲခံခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုထုတ်ပယ်ပစ်တာနဲ. ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုရဲ. မူမမှန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးများ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ (ခ) မျိုးရိုးနဲ.အရှိန်အဝါ […]
The last monent of U Ko Ni, legal advisor to NLD
photo credit to Mg Nyi Nyi We Salute you, Sir!
“ကန်ရာ” Photo credit Than Htike အပြင်သွားမလို့ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲပြီးကာမှ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ဦးကိုနီသတင်းလည်း ဖတ်လိုက်မိရော ငုတ်တုတ်မေ့ပြီး အစီအစဉ်တွေ အကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်မိတယ်။ ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ယုတ်ကန်းလွန်းတဲ့သူတွေနဲ့ တမြေတည်း လူလာဖြစ်ရတာ စိတ်နာလို့မဆုံးဘူး။ နောင်ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာ အဲ့လိုလူတွေနဲ့ တစ်စက္ကန့်မျှတောင် မဆုံလိုဘူး။ ရန်ညှိုးရန်စမရှိပဲ လူမမယ်ကလေးငယ်ကလေးကို ချီပိုးထားတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်ကို နောက်ကျောကနေ နားထင်ကို သေနတ်နဲ့တေ့ပစ်ဖို့ဆိုတာ ပထမဦးဆုံးတစ်ကြိမ်ပါ ဆိုတဲ့သူတွေ လုပ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ တကယ်လို့များ အဲသည်လို လက်ယဉ်နေတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားတွေ လိုချင်ရင် ဘယ်မှာသွားငှားလို့ ရနိုင်မှာပါလိမ့်။ ကိုယ်တွေ့ဖူးသလောက် ပြောကြေး။ လောက်ကိုင်မှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲသမှာ ပိုက်ဆံပေးရင် ဘော်ဒီဂတ်လည်း ငှားလို့ရတယ်။ လူသတ်သမားလည်း ငှားလို့ရတယ်။ အခု ဆင်ကောင်ကြီး မိနေပြီလေ။ […]
အထူး ၀မ်းနည်း ကြေကွဲခြင်း နေ့လယ် ၃း၁၅ နာရီ စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ (စင်္ကာပူ ထရန်စစ်) ရန်ကုန် ပြန်သွားတဲ့ … ဦးကိုနီ ရန်ကုန်လေဆိပ် တက်စီစတန်းမှာ ခုလေးတင် ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ် လုပ်ကြံခံရ …။ သူတို့ ယုတ်မာကြပြီ။ အားလုံး သတိရှိကြပါ။ စိုးထွန်း စကားချပ်။ ခုလေးတင် ဦးကိုနီ၊ ကိုမြအေးတို့နဲ့ လေယာဉ် တစ်စီးတည်း ကျတဲ့ သူငယ်ချင်း ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြောတာ။ ဒီပုံက လေယာဉ်မထွက်ခင် ဦးကိုနီကို သူငယ်ချင်းက နှုတ်ဆက်ရင်း ရိုက်ထားတာပါ။ Credit to (ko) Soe Tun
Kyu Kyaw Stories from Mysnmar
အစကတော့ ရပ်ကွက်ထဲကို အိမ်ငှားအဖြစ် ပြောင်းလာတယ်။ ကျောင်းစိမ်းဝတ်ကလေး ၂ ယောက်လောက်လည်းပါတယ်။ သူများအိမ်ဘေး အဖီလေးချပြီးနေ။ ဝိုင်းထဲ တဲထိုးနေ။ တစ်လ ၂ သောင်း။ လင်ရောမယားပါ ကြုံရာကျဘမ်းလုပ်။ အိမ်ကြက်မွေး။ ရောင်း။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်။ ဒါပေမယ့် အလကားနေတာ မဟုတ်ဖူး။ စံမံကိန်းနဲ့။ အဲဒီတစ်နှစ်အတွင်း အပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ မြေကွက်အလွတ်တွေကို လိုက်ကြည့်ပြီးသား။ ဒီအကွက်က ပိုင်ရှင် ဘယ်သူ။ ဘယ်မှာနေ။ ဒီအကွက်က တစ်နှစ်အတွင်းပိုင်ရှင် လည်းမလာ။ ဘယ်သူမှ လာမကြည့်။ မှတ်ထားတယ်။ အရေးကြီး နံပါတ် တစ်။ ဒါက ယောက်ကျားဖြစ်သူ လုပ်နေတဲ့ Master Plan. သူ့မိန်းမက လည်း ခေသူမဟုတ်။ ရပ်ကွက်လူကြီး အိမ် အဝင်ထွက်လုပ်ပြီးနေပြီ။ ဝါဝင် ဝါထွက် နဲ့ […]
#ကယ်​ကြပါဗျို့?? #saveYBS😎 #လုပ်​​တောင်​မလုပ်​ရ​သေးဘူးပြုတ်​​တော့မယ်​😡😡😡 ကျွန်​​တော်​ YBS ၃၆ လိုင်းမှာ​မောင်း​နေပါတယ်​ ​ထောက်​ကြန့်​ ဆူး​လေ​ပြေးပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​တို့ကို ကားအပ်​တုံးက​တော့ ၁ ခရီးသည်​နှင့်​ယာဉ်​အန္တရာယ်​ကင်းရှင်း​ရေး ၂ခရီးသည်​နှင့်​ယာဉ်​အန္တရာယ်​ကင်းရှင်း​ရေး ၃ခရီးသည်​နှင့်​ယာဉ်​အန္တရာယ်​ကင်းရှင်း​ရေးဆိုပြီး ကားအပ်​ပါတယ်​ ​ငွေ​ရေး​ကြေး​ရေးအ​ကြောင်းဆို လုံးဝမဟပါဘူး ဘယ်​​လောက်​ရရ မရရ ကျွန်​​တော်​တို့အလုပ်​ မဟုတ်​​ကြောင်း ခရီးသည်​​တွေ အဆင်​​ပြေ​အောင်​ အချိန်​ပြည့်​ ဆွဲ​ပေးရမှာ ဖြစ်​​ကြောင်းသာ မှာပြီး တစ်​ပတ်​ပြည့်​တဲ့အချိန်​မှာ ကျွန်​​တော်​တို့ YBS ကား​တွေက ဝင်​​ငွေနည်း​ကြောင်း ယခုအတိုင်းသာအပ်​ပါက ကားပြန်​သိမ်း၍ ​နောက်​ယာဉ်​​မောင်း ယာဉ်​​နောက်​လိုက်​တင်​၍ ​ပြေးဆွဲမှာဖြစ်​​ကြောင်း ​ပြောလာပါတယ်​ ပြဿနာက အဲမှာစပြီ အုပ်​ချုပ်​သူ​တွေက ယခုအစိုးရမှ လူများမပါ မထသ မှ လူ​ဟောင်းသက်​သက်​​တွေ စား​နေကြ​ကြောင်​ပါး​တွေ ပြီး​တော့ လိုင်း​ထဲမှာ အပြင်​ကား​တွေလည်း လက်​ခံထား​တော့ အရင်​အုံနာနဲ့ ယာဉ်​​မောင်းစပယ်​ယာ​တွေ ပါလာပြန်​​ရော […]
Myanmar Honda Fit Club contribution for changes!
Myanmar Honda FiT Club(MHFC) အခမဲ့ယာဉ်လမ်းကြောင်းပြေးဆွဲပေးပါမည် ဇန်န၀ါရီ၁၇ရက် နံနက် ၇း၃၀-၉း၃၀ ထိ သခင်မြပန်းခြံ-ဗိုလ်တထောင်ဘုရား (ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက်လွန်းပျံ) ခရီးစဉ်အတွက် အသင်းဝင်ယာဉ် ၁၀စီးနှင့်အထက် (အခမဲ့) ပါဝင်ပြေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ညနေရုံးဆင်းချိန်နှင့် နောက်နေ့များမှာလည်း ပြေးဆွဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားလမ်းကြောင်းများကိုလည်း MHFC အသင်းဝင်ကားစီးရေ ၃၀၀ ကျော်အနက်မှ အားလပ်သည့်အချိန်များတွင် မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် ၎င်းတို့၏ယာဉ်များဖြင့် အခမဲ့ပြေးဆွဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာ မည်သူမဆိုပါဝင်နိုင်ပါတယ် ပါဝင်ချင်သော ယာဉ်များ မနက်ဖြန်(17ရက်နေ့) မနက် ၇း၀၀ နာရီတိတိ သခင်မြပန်းခြံဘေးက သခင်မြပန်းခြံလမ်း (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရှေ့)ကို အရောက်လာခဲ့ကြပါ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ စနစ်သစ်ပြောင်းလဲမှုတွင် ပါဝင်ကူညီကြသည့် အသင်းဝင်များကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။ #Admin_Team
Announcemet from YBS Offical!
Screen captureဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။ ကိုယ်တော့ စကိုင်းနက်ဖြုတ်ထားလို့ ဒီ အင်တာဗျူး မကြည့်လိုက်ရဘူး။ ဒီအတိုင်းတကယ်ဖြေချသွားတယ်ဆိုရင်တော့ အမေးဇင်း😲😲😲😲😲😲😲😲 Credit to Htoon Htoon Lwin
New Buses at Yangon
ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက် ရန်ကုန်မှာ စတင်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမယ့် #YBS ဘတ်စ်ကားများ။ သတင်းဓာတ်ပုံ – အိမမမွန်
MaHtaTha has fallen!! Credit to Zaw Zaw Maung
မိန်းမဖြစ်သူ ထုပ်စည်းထိုးနေတာကို စိတ်အေးလက်အေး ထိုင်စောင့်နေတဲ့ ဦးကိုကိုကြီး (၈၈) ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ မနေ့က လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ တကသ ကျောင်းသား ညီငယ် ညီမငယ်တွေနဲ့ ၈၈ ငြိမ်း/ပွင့်က လူကြီးတွေ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ လုပ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ မိန်းမဖြစ်သူ ထုပ်စည်းတိုး ကစားနေတာကို တာဝန်ကျေစွာ ထိုင်စောင့်နေသူ ကျွန်တော်တို့ အကိုကြီး ဦးကိုကိုကြီး (၈၈) Photo- မောက်ခမ်းဝါ Credit – Ko Kyaw Swar Myint
လှည်းယဉ်ဖြင့် ဘွဲ့တက်ရောက်ယူခွင့် ကြိုတင်ခွင့်တောင်းခဲ့ ——————————- မုံရွာတက္ကသိုလ်၁၇ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုလှည်းယဉ်ဖြင့်တက်ရောက်ယူခွင့်ပြုရန် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခဲ့သည်ဟု မုံရွာတက္ကသိုလ်မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ရုက္ခဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရခဲ့သည့်ကျောင်းသူတစ်ဦးမှခွင့် တောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မုံရွာတက္ကသိုလ်မှလည်းခွင့်ပြုခဲ့သည် ယနေ့ဇန်နဝါရီ၅ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် အစမ်းလေ့ကျင့် မှုတွင်လည်းယင်းကျောင်းသူမှလှည်းယဉ်ဖြင့်တက် ရောက်ခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့လှည်းယဉ်ဖြင့်ဘွဲ့ယူမှုမှာမုံရွာတက္ကသိုလ်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Photo Htet Ko Ko Aung Credit to Monywa Gazette
RIP famous Writer (Daw) Kyi Aye
နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာမကြီး ကြည်အေး(အသက် ၈၇နှစ်)ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၆နာရီ ၄၉မိနစ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။ Credit to ဧရာဝတီ
Posted in Articles, Asia Entertainment, shweDarling | No Comments »
သတိရခြင်း(၃၀) ************** လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကို ပြန်သတိရတဲ့အခါ (၁၇) ~~~ ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေးချင်တဲ့ နေ့ရက်ထဲမှာ ဆယ်တန်းတုန်းက အဖြစ်ပျက်တွေပါတယ်။ အားကုန်အားစိုက် ကြိုးစားပေမယ့် လိုက်မမီနိုင်တဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ သင်ကြားနည်းစနစ်မှာ ကိုယ်ဟာ လုံးပါး ပါးခဲ့တယ်။ နှစ်လယ်မှ စတက်ရတဲ့ ၀ိုင်းတွေမှာလည်း ကိုယ်ဟာ စာမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ နယ်ကို လွမ်းတဲ့စိတ်၊ စာမလိုက်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ်ဟာ စာအုပ်တွေကြားမှာ သွေးပျက်ခဲ့ရတယ်။ ကယ်သူမဲ့နဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို စီမံရတဲ့အခါ ကလေးငယ်အတွေးမို့ အမှားတွေ များခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်းရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေကို သေချာထိန်းကျောင်းပေးနေတာ တွေ့တိုင်း မတွေးချင်တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပြန်သတိရမိတယ်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်တဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေက နယ်မှာပဲ နေရတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ အရေးကြီးမှ မီးပျက်ရသလို အလင်းနဲ့ အနွေးဓါတ်လိုကာမှ ဟိုဘက်ကမ်းကို […]
Lip color injection!
နှုတ်ခမ်းကာလာဆေးသွင်းပြီး လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ ကာစတန်မာမောင်လေး နဲ့ မလှမပဖြစ်နေတဲ့ သိမ့် အမှတ်တရ Credit to မသိမ့်​သိမ့်​သူ
Posted in Articles, Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Knowledge Base | No Comments »
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား Eleven Media Group ၏ CEO နှင့်Eleven Media Group မှ တောင်းပန် Credit to ယနေ့ထုတ် Daily Eleven သတင်းစာ
Minister Phoyo Min Thein participsted in cycling
ဒီဇင်ဘာ၂၅ရက် နံနက် ၆နာရီ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့နယ် Star City အိမ်ရာတွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်မြို့ လူထုစုပေါင်းစက်ဘီးစီးနင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတက်ရောက်၍ စက်ဘီးစီးနင်းပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့သည်။
Posted in Humor, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, shweDarling | No Comments »
ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၁၃ ကစပြီး ရေအောက်ဓာတ်ပုံပညာ ကို တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ… တစ်ချို့တွေက Dive လုပ်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်… ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Dive လုပ်ပါတယ်… အနှစ်သာရရော အဓိပ္ပါယ်အရရော အများကြီးကွဲပြားခြားနားပါတယ်… ဒီနှစ်လည်း ထုံးစံအတိုင်း ရေအောက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ ကျွန်တော် ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ… ရေထဲကို စဆင်းဆင်းခြင်း ပထမဆုံး သတိထားမိတာကတော့… မြန်မာ့ရေအောက်အလှဟာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်လျော့နည်းလာနေပြီဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီနေ့မနက် ရေထဲစဆင်းဆင်းခြင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ ကျွန်တော့ရင်ကို စို့စေခဲ့ပါတယ်… အခုမြင်နေရတဲ့ပုံတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်က ကျိုးပဲ့နေတဲ့ ကျောက်ခက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်… မြင်မကောင်းလောက်ကအောင် တပုံတပင်ပါပဲ… ကျောက်ခက်တွေပျက်စီးခြင်းဟာ ရေနေသတ္တဝါတွေရဲ့ Eco System ကို ပြင်းစွာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်… ဒီလိုကျောက်ခက်တွေပျက်စီးရခြင်းရဲ့ […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Respectful Teacher from War Zone
“လေးစားပါတယ် ဆရာမဒေါ်မြရူပါငယ်” . တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ကြား လွတ်ရာကို တစ်ယောက်တည်း ပြေးပုန်းနေပါလား ဆရာမရယ်… ဘာဖြစ်လို့ အပြင်ထွက်လာရတာလဲရှင် ဆရာမတို့ပြောတော့ “တပည့်မရှားပါဘူး”ဆို ဘာမှ သွေးမတော်တဲ့ တပည့် တစ်ယောက်ကို လက်နက်တွေကြား ပြေးကယ်တော့ အခု ဆရာမ လက်နက်ကြီး ထိမိပြီ မလား… တပည့်တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်က ဆရာမရဲ့အသက်ထက် ပိုအရေးကြီးလို့လားရှင် ရတဲ့လစာက ဆရာမတစ်ခါ ဖျားစားတောင်မရ နေဆင်းရဲ စားဆင်းရဲ အိမ်နဲ့ဝေး ချစ်သူနဲ့ဝေး ဗုံးကျည်တွေကြားမှာ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးရတာ ဆရာမမို့အလုပ်ကို စိတ်မကုန်တဲ့အပြင် တပည့်တွေအတွက် အသက်ပေးရဲတဲ့ ဆရာမဒေါ်မြရူပါငယ်ရယ် လေးစားပြီးရင်း လေးစားပါတယ်ရှင်… copy from Aung Soe photo from- Nay Nay Haha
Amay Suu needs to review this matter
”ဒီမိုက​ရေစီ​ခေတ်​ကာလမှာ ဖြစ်​သင့်​ဖြစ်​ထိုက်​တဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ မဟုတ်​ဖူး” ​- ဒေါက်​တာထွန်းဝင်း သတင်း – ဥာဏ်လှိုင်သင်း သမ္မတအမိန့်နဲ့ တာဝန်က ရပ်​စဲခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ စိုက်​ပျိုး​ရေး​၊ေ မွးမြူ​ရေးနှင့်​ ဆည်​​မြောင်းဝန်​ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်​ကြီး​ ဒေါက်​တာထွန်းဝင်းက သူဟာ ပြင်းထန်​တဲ့ အပြစ်​​ပေးမှုကို ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရတယ်​လို့ ​ပြောပါတယ်​။ သမ္မတရုံးက ယမန်နေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်) ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စာထဲမှာ သူ့ကို တာဝန်မှ ရပ်စဲလိုက်တယ်လို့သာ ဖော်ပြထားပြီး အကြောင်းရင်းကိုတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ”ဒါကို​ဖြေရှင်းဖို့ အစိုးရမှာတာဝန်​ရှိတယ်​”လို့ ​နေပြည်​​တော်​မှာရှိတဲ့ ဒုဝန်​ကြီး​နေအိမ်​မှာ ဒေါက်တာထွန်းဝင်းက ယနေ့နံနက်​ပိုင်းမှာ ပြောကြားလိုက်​တာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်​ခဲ့တဲ့သုံးလ​လောက်​က အစည်းအ​ဝေးတစ်​ခုမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်​ကြီး​ဒေါက်​တာ ​အောင်​သူနဲ့ လုပ်​ငန်းပိုင်းဆိုင်​ရာ အငြင်း​ပွားမှုက​နေ ဒီအ​ခြေအ​နေအထိ​ ရောက်​လာတာဖြစ်တယ်လို့ သူယုံကြည်​​ကြောင်းလည်း သူက​ပြောပါတယ်​။ […]
Myanmar Nationa Library
နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)အား ပြည်သူများ သက်သာလွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်မပျက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ****************************************** အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)အား နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စာကြည့်တိုက်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်ရှိသော အများပြည်သူ သွားလာမှု ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ဝန်ဆောင်မှုပိုမိုပေးနိုင်သည့် အမှတ် (၆၀၈) ကုန်သည်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆောက်အဦး လွှဲပြောင်းလက်ခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေး၍ မူလလက်ရာမပျက် ပြုပြင်ခြင်း၊ Layout Plan ရေးဆွဲ၍ ခင်းကျင်းနိုင်ရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း များကို လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲ၍ အဆင့်လိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦးလွှဲပြောင်း၊ လက်ခံခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၃၁ ရက်နေ့ တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သာသနာရေးနှင့် […]
First high official has been kicked out from NLD Gov.
Response from Dr. Tun win
Posted in Articles, Asia Entertainment, Myanmar/Burmese | No Comments »
Please protect Irrawaddy & Irrawaddy dolphin!
သားကြီးမရေ အမျှအမျှ ကျွန်တော်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ၅/၁၁/၂၀၁၆ နေ့  ဧရာဝတီလင်းပိုင် လေ့လာရေးသွားစဉ် လင်းပိုင် ဆရာကြီး ဦးမောင်လေးနဲ့အတူ အင်ဒေါင်းရွာ အနီးမြစ်ပြင်ထဲ လှေငယ်တစီးနဲ့ သွားခဲ့ပါတယ် သူတို့လေးကောင်အုပ်စု ရှိနေပြီး ကျွန်တော်တို့ ကိုကူနေပါတယ် ခဏအကြာ အထက်ဖက် ၇ကောင်အုပ်စုနဲ့ ပေါင်းမိသွားပြီး အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ခဏအကြာ ပေ၇၀၀ မျောပိုက် အထက်ကဆင်းလာလို့ ပြန်ပြေးကြတာမြင်ခဲ့ပါတယ် အခုတော့ မီးဖွာခါနီး လျှပ်စစ်လျှော့ ဒဏ်ရာ နဲ့ သူသေဆုံးခဲ့ပါပြီ သူ့အကြောင်း ရေးဘို့ကျွန်တော့် ပြင်နေရင်းမရေးဖြစ်ခဲ့ပါ.. သာကြီးမ ဟာ အသက်အားဖြင့် ရာကျော်နေပါပြီ သိတ်စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ် သူ့ကို အနီးကပ် မြင်ဘူးမိတော့ ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြမှာလား ကိုယ်ဝန်ဆောင် […]
Interviewed with Teacher Daw Myint Myint Zaw
Credit to Yoe Pyaypyit Aung
Proud of Ma Hana aka Cho Zin Myint
မချိုဇင်မြင့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်…. Falling Walls Lab 2016 Myanmar ရဲ့ First Winner ဖြစ်သူ မချိုဇင်မြင့်ဟာ ကျွန်တော်တို့ FNF – Myanmar ရဲ့ ရုံးအကြီးအကဲ Ms. Katharina Weber Lortsch နဲ့အတူ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး Falling Walls Global Lab Finale ကို တက်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ဆန်သစ် သစ်လွင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ မချိုဇင်မြင့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အရပ်ရပ်က လူအယောက် ၁၀၀ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Global Lab Finale ရဲ့ ပထမဆုကိုတော့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ […]
(၂၀၁၆)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၆)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ (၄)နာရီလောက်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝင်ပေါက်ရှေ့က တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းပေါ်မှာ တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကားတစ်စီးက ပလက်ဖောင်းပေါ်ထိတက်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ ဈေးသည်တစ်ယောက်ကို တိုက်ခဲ့တာပါ။ (၅)ယောက် ထိခိုက်မိခဲ့ရာမှာ အခု နိုဝင်ဘာ (၈)ရက် မနက်ထိ (၂)ယောက်ကတော့ ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ထိခိုက်မိတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စုံတွဲ ပါခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ မချိုချိုမြင့်ကတော့ ဦးနှောက်ထဲ သွေးရောက်ရာကနေ ဒီမနက်မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယာဉ်တိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဘာမှဝင်ပြောဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပေမယ့် ယာဉ်မောင်းသူဘက်က လော်ဘီတွေရဲ့ သည်းခံချင်စရာ မရှိလောက်အောင် ဖာထေးကာကွယ်မှုတွေအပြင် ထိခိုက်မိသူတွေကိုတောင် အပြစ်ဖို့ချင်တဲ့ Victim Blaming ဆန်ဆန် အရေးအသားတွေကြောင့် ဒီPostကို ကျွန်တော် […]
Ripped off University from Taiwan!
မယုံကြပါနဲ. ထိုင်ဝမ် တက္ကသိုလ် မှာ တနေ့ ၄ နာရီ စာသင်ပေးပြီး ၄ နာရီ အလုပ်လုပ်ပေး ရင်ဘွဲ.ပါရပြီး ဝင်ငွေလဲရတယ် လို.ညာပြီး ခေါ်လာတယ် ။ အခု တနေ့ ၈ နာရီ လုပ် ပေးရပြီး ပိတ်ရက် စနေနေ့ ပါ ၈ နာရီ ထပ်လုပ်ရပြီး အချိန်ပို လုပ်အားခ( ၂ ဆ ) မပေးပါ၊။ တရုတ် ဘာသာ ဂျပန်ဘာသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၃ မျိုး သာ သင်ပေးတယ်။ အလုပ်သမား ရှားပါး လို့ တဖက်က မက်လုံး ပေး ပြီး ညာခိုင်းစား နေတာ လခ ကို ကျောင်းသားလက်မအပ်ပါ။ စာချုပ်အတိုင်း […]
Best Teachers of the Year
ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင် ကျောင်းသားများအား ကယ်ပြီး KIA ရဲ့ လက်နက်ကြီးမှန်ခဲ့သော ဆရာမနှင့် အသံသာသာဖြင့် ကဗျာရွတ်ဆို သင်ကြားသော ဆရာမတို့ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့တွင် ဆုရ မုံရွာ၊ အောက်တိုဘာ ၂၂။ ဟိန်လင်းသန့် ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင် ကျောင်းသားများအား ကယ်ပြီး KIA ရဲ့ လက်နက် ကြီးထိမှန်ခဲ့သော ဆရာမ ဒေါ်မြရူပါငယ်နှင့် အသံသာသာဖြင့် ကဗျာရွတ်ဆို သင်ကြားပေးပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တွင် လူကြိုက်များခဲ့သော ဆရာမ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဇော်တို့အား ဆရာများနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊မများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၄င်းပွဲကို မုံရွာမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၂၂ရက်နံနက်ပိုင်းက မြို့တော်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းပွဲတွင် ၈၈မျုိးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုမင်းကိုနိုင်ကလည်း ဆရာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခဲ့သည်။ “ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့်ဇော်ကို […]